Daawo Sawirada '' Dibad baxayaal Careesan oo oo Jidgooyo u dhigtay Musharax Donald Trump - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa magaalooyin iyo Gobolo kuyaala dalka Mareykanka kusii kordhaya dadka kasoo horjeeda Siyaasada iyo cunsuriyada Musharaxa hantida badan heesta ee Donald Trump.
Dibad baxayaal careesan ayaa jidgooyo waxa ay dhigteen Wado weyn oo kutaala Arizona gaar ahaan goob lagu qabanayay banaanbax lagu taageerayay Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga Donald Trump.
Dadka gooyay jidkaasi ayaa is hortaag ku sameeyay in halkaasi uu maro Musharaxa cunsuriga ee Donald Trump, inkastoo markii dambe ay ciidamada booiiska ku guleesteen in jidgooyadaasi qaadaan uuna halkaasi ka gudbo musharaxa.
Ciidamada booliiska ayaa xiray dhoor qof oo lagu tuhmayo in ay horkacayeen dadkii xiray wadada aada halka uu ka dhacayay isku soo baxa lagu taageerayay ololaha musharaxa ugu cadcad xisbiga Jamhuriga ee Donald Trump.
Magaalooyin kuyaala dalka Mareykanka dhawaan waxaa ka dhacay banaanbaxyo qaarkood rabshado wateen oo looga soo horjeeday musharax Donald Trump, oo ah nin cunsuri ah si weyna u neceb dadka muslimiinta ah iyo kuwa kasoo jeeda qaarada Latin Amerika.
Ciyaarta nuucaan dumarka waa jacel yihiin abaa daawo